Lahatsary Vaovaon’ny Coldplay Ahitàna An’i Beyonce, Miatrika Dona Mafy Noho ny Filazàna Azy Ho Mitsaratsara Fahatany Ny Kolontsaina Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2016 1:56 GMT
Lasa resabe ilay lahatsary vaovao navoakan'ny tarika Britanika mpihira gadona mavesatra Coldplay miaraka amin'ilay mpihira Amerikana Beyonce, noho ny filazàna azy ho maka mitsaratsara fahatany ny kolontsaina Indiana.
Ahitàna “godmen” (sadhus) sy ankizy “Bahurupi” natao ho Shiva ao anatin'ireo olona hita ao amin'ilay lahatsary.
Nanoratra tao amin'ny The Wire i Nishita Jha hoe “mitovy amin'ny lehilahy fotsy hoditra tsotra mpandehandeha tsy mahamarika afa-tsy ireo saina miloko safran sy lehilahy masina be volombava fotsiny” ny fitondrantenan'i Martin:
Angamba mba hahazoana bebe kokoa ny adihevitra mitombo hatrany manodidina ilay rakitsary, tsaratsara kokoa ny miverina mijery ny fotokevitr‘i Edward Said momba ny fankafizana ny tontolo Tatsinanana:
Araka ny voalazan‘i Richard King, ny fandinihan’ i Said dia misahana ny “fifandraisana eo amin'ireo fitantaràna akademikan'ny Tandrefana ny amin'ny natioran’ “ny Tatsinanana” ary ny fahambonian'ny fandaharam-potoana ara-politikan'ny Tandrefana mpanjakazaka.”
Tamin'ny taonjato faha 21, io “fahambonian'ny fandaharam-potoana ara-politika” io dia azo norasina ho toy fitadiavana ny fitohizana ara-lojikany ao amin'ny kolontsainan'ny fanjakazakana, amin'ny fangalàna ny an'ny hafa ary fitsaratsaràna fahatàny ny zavatra miely amin'ny alalan'ny mozika sy ireo karazana kanto hafa.
Amin'izany fitsaratsaràna fahatàny izany, sahala amin'ny fitsaratsaràna ny Sikh mpamily fiarakaretsaka manao fehiloha, eto izao ny fampisehona an'i Beyonce ho toy ny mpanjaka Indiana no hitan'ny maro ho tena olana.
Ho fanampin'ireo fihetsik'ilay Amerikana mpanakanto, notsipihan'ireo mpanohitra ilay rakitsary ihany koa ny zavamisy hoe ilay Indiana mpanakanto malaza, Sonam Kapoor — tena olo-malaza be any Bollywood — dia zara raha nipoitra valo segondra tao amin'ilay lahatsary, tena nampilalaovina ny toerana faharoan'ity mpihiran'ny Destiny's Child teo aloha ity.
Taminà matoan-dahatsoratra tao amin'ny Indian Express, nanoratra i Aditi Anand fa tsy hitany loatra ny olana amin'ilay lahatsary.